ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းအခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုမည်သို့သိရမည်နည်း Gadget သတင်း
Ignacio Sala | | မိုဘိုင်း, လဲ tutorial
သုံးစွဲသူများသည်အဆင့်မြင့်ဖုန်းများကိုခံစားနိုင်စေရန်အတွက်ကြိုးပမ်းနေသည့်အချိန်တွင်ကျောက်ကပ်မှထွက်ခွာစရာမလိုဘဲဖုန်းစျေးနှုန်းကိုထောက်ပံ့ရန်အော်ပရေတာများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အပ်နှံခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများကိုစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မသွားခြင်းမှတားဆီးရန်အော်ပရေတာများသည်များသောအားဖြင့်စက်ပစ္စည်းများအားပိတ်ဆို့ခြင်း၊ များသောအားဖြင့်နှစ်နှစ်ကြာသော lockdown.
ဒါပေမယ့် Terminal ကိုရောင်းချင်တယ်၊ ငါတို့မှာရှိတာကိုငြီးငွေ့ပြီးထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ terminal ကဘယ် blockage ကိုမှမပြဘူး၊ ဆိုလိုတာကသူနဲ့မဆက်စပ်ဘူး တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာမှမဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ terminal ကိုတောင်းဆိုနိုင်သောငွေသည်များစွာကွာခြားသည်။ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြမယ် ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းအခမဲ့ရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း.
ယနေ့တွင်အော်ပရေတာတော်တော်များများကဖုန်းများ၊ အထူးသဖြင့် iPhone နှင့် Samsung ကဲ့သို့အဆင့်မြင့်ဖုန်းများကိုထောက်ပံ့မှုများကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလစဉ်အဆင်ပြေစွာပေးဆောင်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းမပြီးဆုံးမီကျွန်ုပ်တို့ terminal ကိုဖယ်ရှားလိုလျှင်၊ ကျနော်တို့မဆိုပြproblemနာမရှိဘဲလုပ်နိုင်ပါတယ်.
သို့သော်အော်ပရေတာအားလုံးသည်စက်ရုံမှကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆိပ်ကမ်းများကမ်းလှမ်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာအလယ်အလတ်အဆင့်သို့မဟုတ်အနိမ့်ဆုံးဆိပ်ကမ်းများသည်ကိစ္စရပ်အများစုတွင်ထောက်ပံ့နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်အော်ပရေတာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအခမဲ့ရရှိသည့်အခါကတိက ၀ တ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အော်ပရေတာများကအနည်းဆုံးလိုအပ်သည်
1.1 Samsung Terminal များ
1.2 Sony Terminal များ
1.3 Huawei ဆိပ်ကမ်းများ
1.4 LG ကဆိပ်ကမ်းများ
1.5 အခြားအော်ပရေတာတစ်ခု၏ SIM ကဒ်ကိုထည့်ခြင်း
3 သော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ IMEI ပါ
3.1 Orange စမတ်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်း
3.2 Vodafone စမတ်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်း
3.3 Movistar စမတ်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းသည်စက်ရုံမှကင်းလွတ်သည်သို့မဟုတ်အော်ပရေတာတစ်လုံး၏တည်မြဲမှုကိုစွဲမြဲတည်ရှိနေခြင်းကိုသိရှိခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည် terminal ကိုဝယ်တဲ့အခါနှင့်၎င်းကိုရောင်းသောအခါနှစ် ဦး စလုံး။ ၎င်းသည်၎င်းကိုရောင်းသည့်အခါ၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်မူလနှင့်မသက်ဆိုင်သို့မဟုတ်အော်ပရေတာနှင့်ဆက်စပ်နေလျှင်၎င်းသည်တန်ဖိုးများစွာကွာခြားသည်။ ၀ ယ်တဲ့အခါမှာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်လို့ရောင်းသူကသက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေမပေးရင်အော်ပရေတာက terminal အသစ်ကို IMEI ကနေတဆင့်ပိတ်တာ၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စက္ကူအလေးချိန်အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ်။
Terminal တစ်ခုချင်းစီသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Terminal ထဲကို ၀ င်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည့်ကုဒ်နံပါတ်များပေးထားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအော်ပရေတာတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိချက်ချင်းသိရှိနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ဤကုဒ်များသည်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါကုမ္မဏီများအရကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သည်အော်ပရေတာနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။
Samsung Terminal များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သည်အော်ပရေတာနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိမရှိသိရန်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည့်ကုဒ်ဖြစ်သည် * # 7465625 #။ ဒီကုဒ်နံပါတ်ခေါ်ဆိုမှုလျှောက်လွှာကနေရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းပေါ်တွင် OFF သတင်းစကားပေါ်လာပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ON မက်ဆေ့ခ်ျပေါ်လာပါကကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သည် operator တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်။
Sony Terminal များ
ဂျပန်တယ်လီဖုန်းဈေးကွက်၏ဆိုနီကကုမ္မဏီမှကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုသိရန်ခွင့်ပြုသည် ## 7378423 ## ကျနော်တို့ terminal ကိုခေါ်ဆိုမှုလျှောက်လွှာတွင်ရိုက်ထည့်ရမယ်တဲ့ကုဒ်။
ပြီးရင် menu ကိုပြသလိမ့်မယ် ဝန်ဆောင်မှုအချက်အလက် ပြီးတော့ configuration။ Configuration menu အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည် Rooting Status ကိုရှာဖွေရမည်။ Yes ပေါ်လာပါကကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသည်စက်ရုံမှအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော် No မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သည်သက်ဆိုင်ရာတယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာနှင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဖုန်းအများဆုံးရောင်းချသောတတိယထုတ်လုပ်သူဖြစ်သော Huawei သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုခေါ်ဆိုမှု application မှအောက်ပါကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုပိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝလွတ်ခြင်းရှိမရှိသိရန်ခွင့်ပြုသည်။ * # * # 2846579 # * # *. Project Menu> Network Information Query> SIM Lock Info ကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ ဆန့်ကျင်စွာ SIMLOCK_DEACTIVE ပေါ်လာပါက၎င်းသည်ဆိုလိုသည်မှာဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Huawei terminal သည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်.
အခြား ရက်စက်တယ် Korean, LG မှကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကို terminal settings တွင်သုံးခြင်းအားဖြင့်ပိတ်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ ချိန်ညှိချက်များအတွင်းတွင်၊ ဖုန်းအကြောင်း၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲအချက်အလက်ကိုကြည့်ပါ။ ဗားရှင်းအတွက်အဆုံးသတ်လျှင် -EUR-XX ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကိုဆိုလိုသည် ဒါကြောင့်စက်ရုံအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ် ၎င်းသည်အော်ပရေတာစစ်ထုတ်စက်များမှ ဖြတ်၍ သွားခြင်းမရှိသေးပါ။
အခြားအော်ပရေတာတစ်ခု၏ SIM ကဒ်ကိုထည့်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အော်ပရေတာတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောအခြားအော်ပရေတာတစ်ခု၏ကဒ်ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လျင်မြန်စွာသိနိုင်သည်။ PIN နံပါတ်အပြင်၎င်းကိုထည့်လျှင်၊ သော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သည် operator တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ဆန့်ကျင်ပေါ်လျှင်ရုံ PIN နံပါတ်တောင်းပါ ၎င်းကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ကဒ်အော်ပရေတာနှင့်ချိတ်ဆက်မိသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအခြားအော်ပရေတာနှင့်စတင်သုံးစွဲနိုင်ပြီး၊
အကယ်၍ သင်၏ဘ ၀ ကိုရှုပ်ထွေးစေလိုခြင်းမရှိသေးပါကဆိပ်ကမ်း၏သတ်မှတ်ထားသောမီနူးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းအားအခမဲ့သို့မဟုတ်အော်ပရေတာကပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုအော်ပရေတာနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်အမြန်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သံသယများလျင်မြန်စွာထွက်ပေါ်လာပြီး၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းအချိန်နှင့် terminal ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးလိမ့်မည်။ ၎င်း၏အခမဲ့လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုပါ။
ယနေ့အထိအော်ပရေတာများအနေဖြင့် ၂၄ လ (ကုမ္ပဏီများကစမတ်ဖုန်းအတွက်ငွေပေးချေရန်ကမ်းလှမ်းသည့်ပုံမှန်အတိုင်း) တွင်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အဆင့်မြင့်သောဆိပ်ကမ်းများအားလုံးသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာ ကက ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ဝယ်လျှင်ကဲ့သို့တူညီသည် စက်ရုံမှလုံးဝအခမဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်။
ဒါဟာနေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်စက်ရုံအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည် တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာကနေမဝယ်ပါနဲ့Amazon မှထုတ်လုပ်သော El Corte Ingles သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုရောင်းချသောအခြားမည်သည့်စက်ရုံမှမဆိုထုတ်လုပ်သူသို့တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်အခမဲ့လား၊ မဟုတ်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်မလိုအပ်ပါ။
သော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ IMEI ပါ
လက်ကိုင်ဖုန်းများ၏ IMEI သည်ကားမှတ်ပုံတင်နံပါတ် (သို့) အင်တာနက်သုံးရန်အသုံးပြုသော IP နှင့်တူသည်။ IMEI မှတဆင့်သင်အမြဲတမ်းသိနိုင်သည် အဘယ်သူသည် terminal ကိုနှင့်၎င်း၏အခြေအနေ, သော့ခတ်သို့မဟုတ်စက်ရုံကနေအခမဲ့ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုပိတ်ထားပြီး ၂၄ လကြာအောင်ဝယ်ယူပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုသော့ဖွင့်ရန်အော်ပရေတာကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသည့်တစ်ခုတည်းသောနံပါတ်မှာ IMEI ဖြစ်သည်။
စမတ်ဖုန်း၏ IMEI ကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နံပါတ် * နံပါတ် * * 06 # ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုသည်။ ထိုအခါ တစ်ဂဏန်းကုဒ်ပြသပါလိမ့်မည်terminal ကိုသော့ဖွင့်ရန် operator ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးရမည့်ကုဒ်။ terminal ကိုလွှတ်သောအခါအော်ပရေတာတစ်ခုချင်းစီတွင်မတူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်များကို device box မှတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် terminal ၏ဝယ်ယူမှုပြေစာမှတဆင့်ရယူနိုင်သည်။
ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ဆိပ်ကမ်းများပိတ်ဆို့ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ကုမ္ပဏီမှတဆင့်စျေးကွက်သို့တင်ပို့ခဲ့သောဆိပ်ကမ်းများအားလုံးသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးသော့ဖွင့်ရန်တောင်းဆိုရန်မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင့်မှာ ၄ နှစ်ကျော်ပါတဲ့ terminal တစ်ခုရှိရင်၊ လိမ္မော်ရောင်ကျွန်တော်တို့ကို website တစ်ခုပေးထားပါတယ် ငါတို့တတ်နိုင်သော သော့ဖွင့်ကုဒ်တောင်းဆိုပါ terminal ၏ IMEI နှင့်အတူတူပင်၏ပုံစံနှင့်အတူ (ဤသည် IMEI ကုဒ်အတွင်း၌ရှိသောကြောင့်မလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်) နှင့်အတူ terminal ကို။
ဗြိတိသျှကုမ္ပဏီ Vodafone မှ terminal တစ်ခုကိုသော့ဖွင့်ရန်မိုဘိုင်း application ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရမည် ဝက်ဘ်ကတဆင့် အဲဒါကငါတို့အကောင့်ကိုဝင်ခွင့်ပေးတယ်။ ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ စီမံခန့်ခွဲမှု> ချိန်ညှိချက်များနှင့်အပိုများကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းကိုသော့ဖွင့်ပါကိုရွေးချယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Unlock mobile option ကိုရှာမတွေ့မချင်းစာမျက်နှာ၏အဆုံးသို့ scroll လုပ်ပါမည် IMEI နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သော့ဖွင့်ကုဒ်ရရှိရန်အများဆုံး ၄၈ နာရီစောင့်ဆိုင်းရပါမည်။ ၎င်းသည်အခြားအော်ပရေတာတစ်ခုမှ SIM ကဒ်ထည့်သောအခါတောင်းဆိုခြင်းမရှိပါက terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်ရမည်။
Movistar ကကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော terminal တစ်ခုကိုသော့ဖွင့်ရန်တောင်းဆိုသည် 1004 နှင့်အတူထိတွေ့ရ ဖောက်သည်throughရိယာမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထို option ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အပြင်။ ဤသို့လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်သော့ဖွင့်လိုသော terminal ၏ IMEI ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အများဆုံး ၄၈ နာရီကြာမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းအခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုမည်သို့သိရမည်နည်း